New Day Jobs | Top5TED Talks for Personal & Professional Growth | Career Blogs
Personal Upgrade 14 Nov 2019
ပိတ်ရက်မှာ ကြည့်ဖို့ အကောင်းဆုံး TED talk (၅) ခု?
TED talk ဆိုတာက နယ်ပယ်ပေါင်းစုံက အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ Knowledge Sharing လုပ်တဲ့ video တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ပြောတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီအတွက်လည်း အချိန် ၁၈ မိနစ် အများဆုံး ပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်တိုတို အတွင်း သင်ခန်းစာ အများကြီး ရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။TED talk ကြည့်ခြင်းက သင့်ရဲ့ ပညာရေးမှာကော လုပ်ငန်းခွင်မှာကော စိတ်ခွန်အားတွေရစေနိုင်ပါတယ်။
အခုပိတ်ရက်မှာလည်း အချိန်တွေကို TED talk ကြည့်ပြီး အကျိုးရှိရှိနဲ့ အသုံးချကြရအောင်။
?1. Amy Cuddy ရဲ့ your body shapes who you are
သင့်ရဲ့ Body Language ဟာ သင်ဘယ်သူလဲဆိုတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်။သင့်ရဲ့ ကိုယ်နေကိုယ်ဟန်ကို အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ကဲ့သို့ ပြုမူလိုက်ပါ။Fake it till you become it ဆိုတာကတော့ သူ ပြောတဲ့ထဲက မှတ်သားဖွယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သင့်အောင်မြင်ဖို့ သင့်ကိုယ်နေဟန်ထားကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲနေထိုင်ရမလဲသိချင်ရင် လက်မလွတ်ပဲ ကြည့်သင့်တဲ့ TEDtalk ပဲဖြစ်ပါတယ်
Check Amy's video out here
?2. Shawn Achor ရဲ့The happy secret to better work
ကျွန်တော်တို့တွေက လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပျော်ရွှင်ဖို့ အလုပ်ကြိုးစားရမယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲ့ယုံကြည်ချက်ကို တစ်မျိုးစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကော? ဒီ TEDtalk မှာဆိုရင် Speaker က အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းအကြောင်းရဲ့ Formula ကို ပြောပြထားတာပါတယ်။
Check Shawn's video out here
? 3. Simon Sinek ရဲ့ Why leaders make you feel safe?
ဘယ်လိုအရာတွေက သင့်ကို ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဖြစ်စေတာလဲ? ဒီ TEDtalk မှာတော့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာ အာဏာရှိခြင်း ပေါ်မှာ မူတည်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နောက်လိုက်တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကနေ ရရှိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို ပြောပြထားပါတယ်။
Check Simon's video out here
? 4. Susan Cain ရဲ့ Power of Introverts
Introvert ဆိုတာ ဘာလဲ? Introvert တွေက မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလား? Social ကောင်းတဲ့သူ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့သူတွေကပဲ အောင်မြင်နေမှာလား ဆိုတာကို ဒီ TEDtalk လေးကနေ အဖြေရှာနိုင်ပါတယ်။
Check Susan' video out here
? 5. James Veitch ရဲ့this is what happens when you reply to spam email
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mail box ထဲမှာ တွေ့နေကြဖြစ်တဲ့ Spam mail တွေက ဘယ်ကလဲ?ဘာကြောင့် Spam mail ထဲ ရောက်နေတာလဲ? အဲ့ Spam Mail ကို စာပြန်ပို့ရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ သိချင်ရင်တော့ အောက်က Link မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Check James' video out here
Interested in Job Opportunities? Browse Jobs Here!